Ochwepheshe ukubukela abesifazane ngesikhathi sokukhulelwa, nodokotela bezingane maningi futhi beqiniseka kakhudlwana exhumene komzimba ezenzeka izinsana, nge ukuvama ukucindezeleka olutholwa umama phakathi nalesi sokukhulelwa umntwana, futhi babuyisele supply yayo ezinyangeni "zithwele", ngakho futhi ngesikhathi lactation.
Ngakho-ke, iseluleko sokuqala kusukela odokotela: ubuncane isipiliyoni, imizwelo eyakhayo kakhulu, imikhiqizo efanele futhi ngendlela enempilo of kokuphila kukanina esizayo. Lezi "izinsika ezintathu" iyona panacea for yokungezwani komzimba in izinsana.
Kunzima lapho amaprotheni ukungabekezelelani e umntwana ngenxa izakhi zofuzo ezibangela. Kodwa kulokhu, zonke ungaluthola ngakho: aid iza ifomula hypoallergenic ngoba nosana.
Ngokuvamile, lesi sifo ezingemnandi futhi iyingozi kunezingane abaku- yokudla yokufakelwa. Njengoba bayaphoqeleka esikhundleni ubisi lukamama unina, okuyinto ugayeka kalula kamama ajwayelekile kubo bonke umzimba wengane, ukuthola obisi inkomo noma gluten (amaprotheni kakhulu, kodwa umsuka yemifino). A izakhi amaprotheni angaphandle akuzona ngakho kuhle ingane umzimba wasebathatha nabafuna walalela.
Imbangela engezwani nokudla okuthile bangase bakhonze njengamaphayona atopy kokuzalwa - iguliswa bathola "ifa" noma ezinye izifo kuchubekele unina ngesikhathi sokukhulelwa. Hhayi indima lokugcina eyadlalwa imikhuba engemihle ezimbi, ukunikela abesifazane abaningi abakuthandi amandla, ngisho ukunothisa ingane. Izingozi eziyinhloko zokubhema.
Kwakubi uma umama ngesikhathi uncelisa ingane abakwazi lotidzelako injabulo ukudla okuthile ngalesi sikhathi esibucayi besingeke sibe khona isidingo izithelo, imifino, izithelo, amantongomane, esiningi ngokweqile amaqanda nobisi, okubabayo kakhulu, ukudla okuthosiwe noma broths eqinile . Ukuze ukungakwazi komama ukuba sikhuthazele ngenxa ukukhokha ingane.
Komzimba e imvuthu osanda kuzalwa kungenziwa obonwa ukuvuvukala, ukuhlanza nasekufelweni amathe njalo phezulu, uhudo noma ukuqunjelwa, amakhala yisisu nokukhwehlela, iphika uncharacteristic izinsana. Izimpawu zingase zenzeke eyedwa noma inhlanganisela.
Ukubona ingane sikhatsi lesingaba tinyanga letisitfupha nobe ngonyaka, oyedwa noma izimpawu asolisayo ngaphezulu kufanele ngokushesha ukuqhuba ngokuxhumana udokotela wezingane bese eqala ukushintsha indlela yokwakheka kokudla. Ngesikhathi esifanayo omama intsha nabangenakho okuhlangenwe nakho kufanele ngekhanda njengoba ABC: ifomula hypoallergenic okwesikhathi olusanda kuzalwa busuka Ukudla kancane kancane, akukho esikhundleni ngesikhathi akufanele kube.
I komzimba kuyingozi nokuthi ungagwema kanjani-ke
Uma umzimba wengane waqala obulimaza amaprotheni, kumane insimbi yokuqala yokuthi esikhathini esizayo kungase kwandise luvelo nezinye izinhlobo izinto ezixabana nomzimba, nezinyane lembuzi uzohlupheka hhayi kuphela ukungakwazi udle evamile, kodwa kusukela isitshalo impova, indlu uthuli izinwele isilwane.
Ukuze ugweme kuyinkinga enkulu kangaka, ngoba ezinyangeni zokuqala zokuphila, ukuthatha zonke izinyathelo zokunqanda komzimba.
Okokuqala, futhi lona umyalo obaluleke kakhulu futhi ngempumelelo, udinga ukuba ngikhuthazele eside ngangokunokwenzeka ingane ibele. A amaprotheni ngobisi womuntu awuwona umfokazi, futhi umzimba wengane ukwenqaba ngeke a priori, ngemishini obisini lukamama kuyinto ngempela eyanele.
Okwesibili, e-Ukushoda okukhulu kwabantu ubisi lwebele kanye contraindications eliphelele inkomo kudinga hypoallergenic Ukwakheka izinsana. Izibuyekezo ohlobo okuxubile yokudla ibonisa ukuthi izingane ezingaphansi kweziyisithupha akufanele inikezwe hhayi bazivumelanisa ngokugcwele ubisi ingxube (equkethe iprotheni zemvelo) - akakwazi ukufunda, akakwazi balahle komzimba.
Ukuzijwayeza Izingxube: okugcwele esinqunyiwe
Ukuze uqonde ukuthi ngxube ngasiphi yobudala izingane kufanele sinikezwe ekudleni, odinga ukukwazi mayelana lokudla yokufakelwa izinsana esisodwa esiyinhloko caveat: ubisi ingxube leyabantu ngokuphelele futhi kancane aguqulelwe nokwenziwa umzimba usana ethambile.
Ngisho nonina ongenalwazi Akwamukelekile ukuthi yini esimweni nomntanakhe kudingeka ifomula hypoallergenic izinsana. Amagama zikhale ngokucacile futhi ngokuqondile njengoba kuthinta kanjani ngempumelelo kuzosiza ingane yakho.
Ngakho, kwaguqulwa ngokugcwele ingxube Ukwakheka Ubuningi bamahora zifane ubisi lukamama, kusekelwe whey demineralized. Ungababona khona izibalo esihlokweni - 1 noma 0-6 ( "Hipp-1", "Nutrilon 1", "Nutrilak-0-6").
Kancane ingashintshwa - okunomsoco ngoba Ukwakheka kwabo obisi. Empeleni, uyena yokuthi isidumbu usana olusanda kuzalwa kalula ukuncela umkhiqizo eziyinkimbinkimbi enjalo. Exutshwe ubisi yemvelo amaprotheni Kunconywa izingane owaphenduka "okuqinile" izinyanga eziyisithupha kulezi zigaba. Uma ukhetha Izingxube ezinjalo kumelwe siqondiswe yiwo "ezimbili" noma pointer yobudala 6-12 ku iphakethe ( "Nan -6-12" noma "Hipp-2").
Izingxube kanye nokusungulwa zabo
Izingane kungenteka uhlushwe elithile ngezinqubo ezihlukahlukene komzimba ukudla - konke kuncike imbangela sifo kanye izici ngamunye umzimba.
Ukuqeda ingane ezithile kusuka ukusabela ethize iguliswa sebenzisa kuphela ingxube, okuyinto efanelekayo kakhulu Ukwakheka nempumuzo esikhundleni wamukelekile ngeke kuzoletha izinkathazo ezengeziwe.
Ngamunye ifomula hypoallergenic izinsana, uhlu okuyinto kukhonjisiwe ngezansi, lihlukile lonke ukwakheka, kodwa nokho alukho uhlobo jikelele. Ngakho-ke, ukukhethwa ukudla okuyisisekelo izinsana kufanele aphathwe ngokucophelela futhi kuphela emva kokubonisana udokotela.
Izinhlobo Ukwakheka Izingxube:
esekelwe ubisi imbuzi ( "Kabrida Gold 1", "Nenni");
esekelwe soy lehlukanisa ( "Similac-Izomil" "Nan-inkinobho yomcibisholo wokuphenya" "Nutrilak-inkinobho yomcibisholo wokuphenya", "Soybean-CEMP" "Tutteli-inkinobho yomcibisholo wokuphenya", njll);
esekelwe hydrolysates ubisi inkomo ( "ephansi lactose Nutrilon-4", "Pepto-Junior," "Alfaro" "Frizopep" "Hipp-GA").
Isisekelo - ubisi bembuzi
Kusukela esikhathini eside esidlule, emikhayeni zasemakhaya lapho izingane zisakhula, kwaba okumele abonwe yendawo emnothweni ukugcina imbuzi noma ezimbalwa. Futhi manje ngenxa ephulukisa ingane zonke unina uzama ukuthenga ubisi imbuzi zemvelo sika. Nokho, lokhu kukhetha ezinhle zokuthi kungani izingane, iphuma yobudala grudnichkovogo. Kanti uthumbu idingeka kuphela ke - ifomula hypoallergenic ngoba nosana.
ubisi Ukwakheka imbuzi akusilo lahluke kabi kulawo ezinkomo, kodwa, nokho, amaprotheni alo kanye amafutha, umntwana umzimba assimilates kulula.
Inhlanganisela esekelwe imbuzi ubisi show izingane iguliswa inkomo kanye soy ubisi. Kodwa bayajabula ukudla nezingane ephelele.
Isisekelo - usoya
Soy ingxube - umkhiqizo lapho lactose engekho ngokuphelele. Babebonakala option best for yokondla izingane nge ukungabekezelelani ukuze ubisi inkomo sika.
Muva nje, ifomula hypoallergenic izinsana "Nan" soy kwaba at esiqongweni ukuthandwa.
Kodwa ngokuhamba kwesikhathi, abazali Ngaqala ukuqaphela ukuthi kunokuthile okungalungile: uhlanganise ngesisekelo salokhu waqala kubangele komzimba izingane. Soy amaprotheni kwakungelona ayinangozi ngakho. Ngakho-ke, ngaphambi ethula inhlanganisela ibe imenyu grudnichka, bonke kumele ube nesisindo futhi isikhwama esingumsuka. Ingane ayikwazi ukuba into zokucwaninga.
Isisekelo - ubisi cow sika
Lezi zithako zihlukaniswa zibe amaqembu uya khona:
ukwelashwa ngaphandle antigen ezidingekile umsoco izingane nge evelele komzimba;
ukusetshenziswa zokwelapha kanye prophylactic kuthiwa wazifunela izingane abasengozini nesenzakalo komzimba ukudla, kanye namafomu onomoya omnene ka ukubonakaliswa bayo (Iningi lomama bakhetha ukuthenga imikhiqizo yasekhaya njengoba option best uye wafakazela ifomula hypoallergenic izinsana "Nutrilak" eRussia.)
zokuvimbela - iqembu lomkhiqizo ukukhalima, exwayisa nesenzakalo komzimba.
A indzima lesembili ukukhethwa umkhiqizo ofanele kakhulu udlalwa by izici ezimbili:
Ukuzihlola isimo jikelele impilo yengane kanye degree sensitization lomzimba zezingane.
Ukuqaphela abazali. hypoallergenic uhlanganise i usana kwasekuqaleni, umkhiqizo zokwelapha, futhi kuphela ke - ukudla.
Ukukhetha ingxube, kubalulekile ukuba banake ezinjalo ezicashile ezibaluleke njengoba amaprotheni wokuqukethwe (lemali elikhulu 12 kuya 14 amagremu ilitha ngomumo asebenziseka ngomkhiqizo ngamunye); izinga amaprotheni, okuyinto kunqunywa isilinganiso whey ukuba casein (izingane izinyanga eziyisithupha, lesi sibalo kumele singeqi 80/20); fat and carbohydrate, futhi leyo mali kufanele kube eseduze ukuthi kutholakala okuyinto ubisi lwebele.
Uma ezinsukwini zokuqala zokuphila ingane engalali ubisi lukamama, kungenzeka ukuthola esikhundleni phakathi ongakhetha yokudla yokufakelwa. Ngokusemthethweni ibizwa ngokuthi - esikhundleni ubisi lwebele, kusala indlela efanayo hypoallergenic izinsana "Similac".
Nokho, nahlulele by ukubuyekezwa, ke kuphakamisa izinkinga: akuzona zonke ezifanele izingane futhi iphunga okunoshukela.
Kuhambisana obonisa izingane 3-4 iminyaka: umsebenzi
Broadleaf cattail - isitshalo, okufanelekelayo ukuba ukusekelwa